Shaqaalaha Dawlad Deegaanka Soomaalida oo mushaar la’aan ka cabanaya – AwKutub News
Shaqaalaha Dawlad Deegaanka Soomaalida oo mushaar la’aan ka cabanaya
By awkutubnews September 22, 2018
Leave a Comment on Shaqaalaha Dawlad Deegaanka Soomaalida oo mushaar la’aan ka cabanaya
Shaqaalaha magaalada Jigjiga ayaa iyagu qaatay mushaar hal bil ah, wararkuna waxay sheegayaan in bil kale ay wali ka maqan tahay.
Daganaansho la’aantii siyaasadeed iyo isbaddalkii baaxadda lahaa ee ka dhacay Jigjiga ayaa horseeday in ay hawlgab inta badan wasaaradihii iyo adeegyadii ay bixin jireen.
Mushahaar la’aanta ayaa saamayn baaxad leh ku yeelatay shaqaale hoosaadka.
“Waxaan ahay aabo dhalay toddobo carruur ah, mushaar ma qaadanin labo bilood, maciishaddii way qaaliyowday, labo ciidood ayaa na soo maray, marka nolosha ayaan la daalaa dhacaynaa” ayuu yiri Cabdiraxman Axmed oo Caamir ku magac dheer oo bare ka ah magaalada Shaygoosh ee gobolka Qoraxay.
Wasaaradda waxbarashada ayaa labada bilood ee ugu dambeeya sannadka dalka Itoobiya macallimiinta siisa waxbarasho bilaash oo ay bixiyaan koleejyada iyo jaamacadaha Itoobiya si sare loogu qaado aqoontooda.
Sidaas daraadeed macallimiinta gobollada ayay mushaar la’aantu saamaynta ugu badan ku yeelatay, sababtuna waxay tahay in dhammaantood waxbarasho loo geeyay meel ka baxsan goobihii ay ka shaqaynayeen.
“Soomaalidu waa dad iska firfircoon oo badankood way soo laabteen nin ehelkiisu ay gacan qabteen iyo mid si kale ku yimaadaba, haddase waxaa adag sidii loo hawlgalin lahaa maadaama ay qatan yihiin, ayuu yiri macalin Caamir.
Waxaa jira warar aad loo hadal hayo oo sheegaya in mushahaar la siiyay macallimiintii aan Soomaalida ahayn ee deegaanka ka shaqaynayay, balse BBC-du si madax bannaan uma xaqiijin karto.
Waxaa hadda la joogaa xilligii iskuulladu ay dib u furmayeen waxaana laga cabsi qabaa in mushaar la’aantu ay saamayso waxbrashada sannad dugsiyeedka dalka Itoobiya ee 2011 oo hadda uun billawday, ayadoo haddii aan mushaar loo helin macallimiinta laga cabsi qabo inay iskuullada tegi waayaan.
“Waxaan ogahay macallin guryaha dhisa si uu nolol maalmeed uga raadsado” ayuu Caamir intaas ku sii daray.
“In shaa Allaah waxaan rajaynaynaa in xukuummadu ay soo dadajiso xalka” ayuu yiri caamir oo ka garawsan baaxadda uu lahaa isbadalka deegaanka ka dhacay iyo culayska xukuumadda cusub haysta.
Tags: DDS Wararka Waxbarashada
Previous Entry Soomaaliya: 27-kii shuruudood ee ay IMF ku xirtay oo dhan wey buuxisay
Next Entry Sawirro : Weerar lagu qaaday ciidamada iiraan